धनाढ्य परिवारका कारण घटना छोप्न प्रहरी लाग्यो की सीताले आफै मृत्यु रोजेको हो ?
गृहपृष्ठ » अपराध » धनाढ्य परिवारका कारण घटना छोप्न प्रहरी लाग्यो की सीताले आफै मृत्यु रोजेको हो ?
काठमाडौ । रुपन्देही तिलोत्तमा नगरपालिका–५ की २७ वर्षीया सीता भण्डारी पौडेल मृत भेटिनुभएको थियो ।
अत्यन्तै सफल व्यवसायीको रुपमा दम्पत्ति स्थापित हुँदै गर्दा श्रीमती चै कसरी एकाएक मृत ? सबैले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका बेला यो बाटो उहाँले नै रोजेको भन्ने प्रहरीले बताएको छ ।
शुक्रबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीले उहाँको मृत्यु प्रकरणबारे हालसम्म भएका अनुसन्धानबारे जानकारी दिएको हो।
पौडेल भदौ २० गते बिहान साढे ४ बजे आफ्नै कोठामा मृत अवस्थामा फेला पर्नुभएको थियो । उहाँको ज्यान लिइएको भन्दै माइती पक्ष, आफन्त तथा स्थानीयले रुपन्देहीमा आन्दोलन गर्दै आएका थिए।
अनुसन्धान अनुसार पौडेलको मृत्यु कर्तव्यबाट नभई आफै रोजेको देखिएको रुपन्देही प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक सत्यनारायण थापाले बताउनुभयो । ‘शव परीक्षण प्रतिवेदनमा उहाँको मृत्युको कारण आफै रोजेको देखिएको छ,’ थापाले भन्नुभयो ।
अनुसन्धानका क्रममा मृतक सीता र उहाँका श्रीमान टिका पौडेलको मोबाइलको प्राविधिक परीक्षणसमेत गरिएको थियो। डिजिटल फरेन्सिक ल्याबमा मोबाइल परीक्षण गर्दा सीताले आफ्ना श्रीमानको नाममा आइफोनको नोट एप्लिकेसनमा मृत्युको कारण लेखेको भेटिएको बताउनुभएको छ ।
अनुसन्धान अनुसार मृत्यु रोज्नुअघि २० गते नै बिहान राति पौडेलले श्रीमानलाई करिब साढे १२ बजे नोट लेखेको पाइएको बताइएको छ । फरेन्सिक रिपोर्टमा सीताले नेपालीमा लेखेको नोट प्राप्त भएको थापाले बताउनुभयो ।
नोटमा मलाई माफ गरिदिनुहोला, मेरो अर्को जुनी भयो, म हजुरहरूकै काखबाट जन्मिन चाहन्छु, मलाई यो जिन्दगीबाट पुग्यो, म बाँच्न सकिनँ भनी लेखिएको छ,’ थापाले भन्नुभयो ‘मेरो सबै गरगहना मेरी आमालाई दिनु भनिएको छ।’
मोबाइलको फरेन्सिक परीक्षण हुँदा नोट र त्यसअघि पौडेलले श्रीमानलाई लेखेको एसएमएसहरूको परीक्षण गरिएको थापाले बताउनुभयो । त्यहाँ सिताले नै लेखेको दावी छ ।
‘यसरी परीक्षण गर्दा उहाँले मृत्युअघि लेखेको नोट र त्यसअघि श्रीमानलाई लेखेको एसएमएसको प्यार्टनसमेत मिलेको देखिन्छ,’ उहाँले दावी गर्नुभयो । भदौ २२ गते सीताका बुवा हरिप्रसाद भण्डारीले श्रीमान् टिका पौडेल, जेठाजु हरिप्रसाद पौडेल र उहाँकी आमाजु विष्णु पौडेलविरूद्ध मुद्दामा जाहेरी दिइएको थियो ।
जाहेरी आएपछि प्रहरीले श्रीमान् टिका, जेठाजु हरिप्रसाद र आमाजु विष्णुलाई पक्राउ गरिसकेको छ। उहाँहरूविरूद्ध ज्यान गुमाउन बाध्य बारेको मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको थापाले बताउनुभयो ।
मृतक सीता र श्रीमान टिका पौडेलबीच २०७६ असोज १८ गते विवाह भएको थियो। उहाँहरूका सन्तान भइसकेका थिएनन् ।
विवाह भएपछि उहाँहरू दुबै पाल्पा जिल्ला धरमपानीस्थित द दरबार रिसोर्ट सञ्चालन गर्दै आउँनुभएको थियो । प्रहरी उपरीक्षक मनोज केसीका अनुसार पौडेल परिवारमा सम्पत्ति बाँडफाँटबारे ६–७ महिनायता विवाद जारी थियो। रिसोर्टलाई बेच्ने मामलामा परिवारमा खटपट भइरहेको थियो।
‘श्रीमान्–श्रीमती बिक्री गर्नुपर्ने पक्षमा थिए, तर त्यस कुरालाई परिवारले इन्कार गरेको हाम्रो अनुसन्धानले देखाएको छ,’ केसीले भन्नुभयो, ‘सासु–ससुरा र आमाजु बिक्री गर्न नहुने अडानमा रहनुभएको देखियो । आमाजुले त्यो मामलामा श्रीमान्–श्रीमतीबीचमा फाटो ल्याउन भूमिका खेलेको देखियो।’
पटक–पटक श्रीमतीसँग यही विषयमा विवाद भइरहेकै क्रममा १९ गते पाल्पाबाट टिका बुटवल आउनुभएको देखिन्छ । त्यसदिन जेठाजु हरिप्रसादकी छोरीको जन्मदिन थियो। जन्मदिन मनाउने क्रममा टिकाले मापसे गरेको देखिन्छ ।
सीता गत भदौ ५ गते नै आफ्नो जन्मदिन मनाउन माइत जानुभएको थियो । भदौ १९ गते सीता आफ्नो माइती घर तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नं. ८ बाट घर फर्किएको देखिन्छ ।
‘जेठाजूको छोरीको आज जन्म दिन हो भनेर श्रीमान टिका पौडेलले बोलाएकोले दिउँसो २ बजे उहाँ तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नं. ५ मणिग्रामस्थित घरमा फर्किएको देखिन्छ ।
जन्मदिन मनाएपछि श्रीमान्–श्रीमतीबीच रिसोर्टको बिक्रीबारे पुनः विवाद भएको थियो। विवादपछि श्रीमानलाई सीताले नै सम्झाएर कोठामा लग्नुभएको प्रहरीको दावी छ । टिका श्रीमतीसाथ सुतेको देखिन्छ । ब्युँझिँदा मृत अवस्थामा फेला परेकी देखिन्छ ।